Xeeladaha Suuqgeynta Sare ee Jiilka Lead | Martech Zone
Xeeladaha Suuqgeynta Sare ee Jiilka Lead
Khamiis, Maarso 20, 2014 Arbacada, Maarso 19, 2014 Douglas Karr
Waxaan la xiriirnay macmiil duug ah maanta oo aan nala shaqeyn sanadkii ugu dambeeyay. Sannad ka hor, shirkado badan ayaa ka faa'iideysanayay kheyraadkeena maxaa yeelay waxaan ka horreynay qallafsanaanta istiraatiijiyadaha ugu habboon ee raadinta. Hadda, waxaan rumeysanahay inaan macaamiisheenna ku sii riixeyno waddada xeeladaha hodanka ah iyo suuq geynta suuq geynta. Way kacday, waxaan ku soconnaa wadada saxda ah. Sida laga soo xigtay Oracle Eloqua, tikniyoolajiyadda, suuqgeynta emailka, xawaaraha iyo waxyaabaha hodanka ku ah waa awooda wadista ee ka dambeysa istiraatiijiyadda suuqgeynta ugu saameynta badan ee hadda la geeyo internetka.
Emailka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay waxqabadka ugu muhiimsan ee suuq-geynta suuq-geynta iyo baahida loo qabo xawaaraha iyo ku-habboonaanta ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn, sida lagu sheegay warbixinta Oracle Eloqua, Qeexida Suuqaayaha Casriga ah: Laga soo bilaabo Dhab ahaantii ilaa Fikrad ahaan. Warbixinta ayaa muujineysa dhowr meelood oo muhiim ah kuwaas oo go'aan qaadayaasha suuqgeynta ay u baahan yihiin inay diiradda saaraan - iyo feejignaan la'aan la yaab leh oo ka timaadda suuqleyda Casriga ah lafteeda. Xeeladaha suuq-geynta ee hodanka ku ah waxyaabaha ay ka mid yihiin, sida waraaqaha cad iyo mareegaha internet-ka, ayaa muhiim u ah jiilka hoggaaminta iyo kobcinta hoggaaminta. Intaa waxaa sii dheer, xirfadaha hal-abuurka ah iyo aqoonta tikniyoolajiyadda suuqgeynta ayaa muhiimad siman ugu leh suuqa casriga ah.
Tags: Content Suuqmarketing digitalemailjiilka ledhagaajinta barbaarintatikniyoolajiyadda suuqgeyntasuuq geyn casri ahoracle eloquashabakadahawaraaqaha caddaanka ahwhitepapers
Iibinta Mawduuca lagu iibin maayo nuxurka
Shaki kuma jiro in emaylku yahay mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee suuqgeynta suuq geynta. iyada oo aan la helin istiraatiijiyad si fiican loo qeexay emailkaaga suuq geynta ROI ayay u badan tahay inuu dhib soo gaaro.
Haa laakiin mararka qaarkood markii suuqleydu u xirmaan lacag caddaan ah waa inay iska dhaafaan dhaqan ahaan taatikada muddada dheer waxayna kaliya ku dhiirrigeliyaan lacag caddaan ah pure
Waxaan ku jiray xaaladan oo si saraaxad leh un ma ahayn waqtigii aan ka fiirsan lahaa faa'iidooyinka mustaqbalka ee dhismaha liistada. Laakiin markii koonka dib loo soo celiyo si loo amro ayaa sidoo kale dhismaha liistada loo sameeyay 🙂
@MarketSecrets: disqus Waxaan wali riixi lahaa rukhsad emayl ah. Haddii aad bixinayso khidadaha muddada-gaaban ah oo aad dad aad u geynayso goobtaada… maxaad u bixin weyday rukhsad kuwa 'laga yaabo' inay xiiseynayaan laakiin aan diyaar u ahayn inay iibsadaan weli? Tani waxay kordhin doontaa maalgashigaaga muddada-gaaban waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku riixdo fariin dheeri ah macaamiishaas wadada.
Waan helay fikirkaaga Caleb, laakiin waan ku raacsanahay Doug.
Faahfaahin dheeri ah!